Akụkọ - Ọgbakọ 13th nke Ọwụwa Anyanwụ na Ọdịda Anyanwụ Obere Ụlọ Ọgwụ Ndị Na -ahụ Maka Ọgwụ na Nnọkọ Nnukwu Mmepe
Mee 25, Kọmitii Na-ahazi nke ọgbakọ Ọgbakọ East-West Small Animal Clinical Veterinarians Conference na East-West Zhilan Exhibition Wuxi Co., Ltd., China Veterinary Drug Association, National Veterinary Drug Industry Technology Innovation Alliance, China Vocational Modern Agricultural. Educationtù Mmụta, China Ugbo Anụmanụ Ọgbara ọhụrụ nke 13 na Eastern na Western Small Animal Clinical Veterinarian Conference nke otu nkuzi ọrụ aka, Nanjing Agricultural University School of Veterinary Medicine na Chengdu Agricultural Science and Technology Vocational College mepere na Chengdu.
Ìhè na onyinyo, ndị na -agwọ ọrịa anụmanụ na mba niile gbakọtara ọnụ. Emepere mmemme mmalite ọgbakọ ọgbakọ ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ nke afọ a n'ụdị imepụta ihe nkiri ọhụrụ. Ejikọtara isiakwụkwọ anọ nke "Mmeghe", "Anyị", "ndị nkuzi", na "Ọdịnihu na -abịa" na "Ihe nkiri anụmanụ" iji gwa ọgbọ nke ndị na -ahụ maka ọgwụgwọ anụmanụ. Àgwà ntachi obi na -esite n'ọgbọ ruo n'ọgbọ, isiokwu nke ọgbakọ nke '' raara onwe ya nye nyocha na inyocha ihe ọhụrụ '' na -aga na ọgbakọ ahụ, na -ewetara ndị na -ege ntị ọkụ ọkụ anụmanụ na njem onyinyo.
Na emume mmeghe, ihe nkiri nkwalite isiokwu "Anyị" wutere ndị na -ege ntị. Ihe nkiri a na -egosi nke ọma otu ndị na -ahụ maka ọgwụgwọ anụmanụ site na mgbagwoju anya nke a katọrọ na mbido ruo na ịdị jụụ mgbe ebumnuche mbụ, na -egosipụta obi ike na nnọgidesi ike nke ndị na -ahụ maka ọgwụgwọ anụmanụ n'oge ngwa ngwa mgbe ha na -eche ihe isi ike na ihe ịma aka ihu.
N'ime ozi mmeghe ya, Cai Xuepeng, onye isi otu ndị na -ahụ maka ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ na China, kwupụtara omume nke ndị na -ahụ maka ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ n'oge a, ma gbaa onye ọ bụla ume ka ọ ghara ichefu ebumnuche mbụ nke ndị na -agwọ ọrịa anụmanụ ma na -agbaso ọrụ dị nsọ nke ndị na -ahụ maka ọgwụgwọ anụmanụ. Dabere na teknụzụ, melite ọdịmma anụmanụ, lekọta ndụ na ahụike, jiri obi gị niile na -ejere ụlọ ọrụ ahụ ozi ma nyeghachi ọha mmadụ! Ọ ka mma ịkọwa mmụọ nke onye na -ahụ maka ọgwụgwọ anụmanụ, uru onye na -agwọ ọrịa anụmanụ na ike nke onye na -ahụ maka ọgwụgwọ anụmanụ.
Dị ka onye na-akọ akụkọ ihe mere eme nke "Ụzọ na-aga ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ", Li Wenjing, onye osote onye isi odeakwụkwọ ukwu nke Association Veterinary Association nke China, kọwara njem siri ike nke ọgbọ ise nke ndị na-ahụ maka ọgwụgwọ anụmanụ maka ihe karịrị afọ 70 iji wusie ụlọ ọrụ anụmanụ anụmanụ China ike. Industrylọ ọrụ ọ bụla, site na nke na -apụta nke ọma ruo na nke zuru oke, agabigala nyocha siri ike nke ndị bu ya ụzọ. Onye osote odeakwụkwọ ukwu Li Wenjing kwupụtara ezi olile anya ya nye ndị na-ahụ maka ọgwụgwọ 'azụ ife', na-enwe olileanya na ndị na-eto eto na-ahụ maka anụmanụ ga-eso nzọụkwụ nke ndị bu ha ụzọ wee rụkọọ ọrụ ọnụ iji mee ka ndị na-ahụ maka ọgwụgwọ anụmanụ bụrụ n'ezie ọrụ a na-akwanyere ùgwù!